बाबुराम भट्टराईलाई एउटा पत्र – Chitwan Post
बाबुराम भट्टराईलाई एउटा पत्र
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ ६, २०७२
पाठक पत्र, विचार
चीन, बिल गेट्स र कोरोना आतङ्क
बाबुराम सर, नमस्कार !
दस वर्षसम्म देशमा सशस्त्र युद्ध गर्नुभयो, हजारौँ नेपालीले ज्यानको आहुति दिए, अर्बौंको संरचना ध्वस्त भयो । सो युद्धकै धरातलमा उभिएर संविधान सभाको निर्वाचन भयो । दोस्रोपटकमा संविधान ल्याउनुभयो, नेपालको संविधान भनौँ कि नेपालीको संविधान ! त्यसका लागि तपाईंलाई धन्यवाद । हुन त, तपाईंले यो धन्यवाद स्वीकार्नु हुन्छ या हुन्न, म जान्दिनँ । जहाँ तपाईंका समकक्षीहरु खुल्लामञ्चमा देशले अब फड्को मारेको भन्दै विदेशीलाई सत्तोसराप गर्दै थिए त्यहाँ तपाईं देखिनुभएन, देखिनु भयो त अनुहार पुस्तकमा या कुनै सिनेमा हेरेको तस्बिरमा । आफूले नै जन्माएको सन्तानको अभिभावकत्व स्वीकार गर्न नसक्ने तपाईंको कस्तो राजनीति, दैव जानून् !
आजकल जताततै तपाईंले खोल्न लाग्नुभएको नयाँ शक्तिको बहस सुन्छु । तातो बहस हो कि राजनीतिक बहसमात्र हो, खालि म यो कुरा बुझ्दिनँ । जो मान्छे अस्तिसम्म नयाँ संविधानले तपाईंका सारा दुःख हरण गर्छ भन्दै चुनावमा लड्नुभएको थियो, त्यो विचार नै तपाईंलाई पुरानो लाग्न थाल्यो अनि खोल्न लाग्नुभयो ‘नयाँ शक्ति’ । तपाईं भने पुरानै मान्छे अनि त्यही जातीयताको कुण्ठित विचार तर तपाईंले खोल्ने शक्तिचाहिँ नयाँ ? कोटावाद, कमिसनवाद र भ्रष्टाचारले घेरिएको सरकारी संयन्त्रले कसरी गर्न सक्छ आर्थिक क्रान्तिको योजना ?
के तपाईंको ‘नयाँ शक्ति’ले त्रिभुवन विमानस्थलमा विदेश उड्न ठिक्क परेका युवाका बारेमा केही सोचेको छ ? अब यो देशका खम्बाहरु मक्काउन थालिसकेका छन् । अझै केही समयसम्म तपाईंहरुका सत्तामा लिप्त राजनीतिको श्रृंखला समाप्त नहुने हो भने देश थला पर्ने निश्चित छ । सधैँभरि रेमिट्यान्सले तपाईंहरुका महँगा चाहनाहरु पूरा गर्न सक्दैन । डाक्टरसाब, कोटाको खोलमा जबर्जस्ती बनाइएका डाक्टरहरुले हाम्रो उपचार गर्न सक्दैनन् । कोटाका प्रहरीले हामीलाई सुरक्षा दिन सक्दैनन् ।
हामी साधारण युवाहरु हौँ, चर्का भाषणले हामीलाई उत्तेजित बनाउँदैन । हामी साना–साना कुरा चाहन्छौँ । देशमा गरिखान पाइयोस् । हामी चाहन्छौँ, हाम्रो भविष्य अरबका तेलका कुवा र खजुरका बगानमा समाप्त नहोस् । बाबुराम सर ! बिन्ती छ, तपाईंको सत्ता प्राप्तिको भ¥याङका रुपमा युवाहरुको प्रयोग नगर्नुहोला । न त यो देश क्रान्तिको नाममा नयाँ युद्ध लड्न सक्ने अवस्थामा छ, न त आर्थिक क्रान्तिका लागि अर्को युगको प्रतीक्षा गर्न सक्ने अवस्थामा छ । त्यसैले, तपाईंले खोलेको ‘नयाँ शक्ति’ बेमौसमको बाजा नहोस् !
(रामपुर क्याम्पस, रामपुर)